Raha mitady kalitao avo lenta ianao Palmitoylethanolamide (PEA) vovoka amidy, avy eo eo amin'ny toerana mety ianao. Izahay dia iray amin'ireo mpanamboatra Palmitoylethanolamide (PEA) malaza indrindra, be fahalalana, ary manana traikefa any Shina. Manome vokatra madio sy fonosana tsara izahay, izay ezahan'ireo laboratoara antoko fahatelo maneran-tany hahazoana antoka ny fahadiovana sy ny fiarovana. Mandefa baiko hatrany manerana an'i Etazonia, Eropa, Azia, ary faritra hafa eto amin'izao tontolo izao izahay. Ka raha te hividy Palmitoylethanolamide ianao (pea) vovoka misy kalitao avo indrindra azo atao, mifandraisa aminay fotsiny amin'ny cofttek.com.
Inona no ilana an'i Palmitoylethanolamide?
Manampy anao ambony ve ny PEA?
Inona avy ireo voka-dratsin'ny pea?
Ara-dalàna ve ny phenethylamine?
Maharitra hafiriana ny PEA?
Tsy hahomby amin'ny fitsapana zava-mahadomelina ve ny phenylethylamine?
Azo antoka ve ny famonjana Pea?
Mandra-pahoviana vao manomboka ny Peas?
Afaka mividy phenylethylamine amin'ny fivarotana ve ianao?
Hafiriana no mety hiasana ny voanjo?
Manampy amin'ny torimaso ve ny pea?
Mampientanentana ve i Pea?
Mandra-pahoviana no mijanona ao amin'ny rafitrao ny phenylethylamine?
Misy phenylethylamine ve ny sôkôla?
Aiza no ahitana phenylethylamine?
Ahoana ny fiasan'ny PEA amin'ny fanaintainana?
Mahaakatra avo anao ve ny phenylethylamine?
Mandra-pahoviana i Hordenine no mijanona ao amin'ny rafitrao?
Azo antoka ve ny Palmitoylethanolamide (PEA)?
Aiza no ahazoako Palmitoylethanolamide?
Inona no atao hoe gilasy?
Inona ny Palmitoylethanolamide (PEA)?
Maninona Isika no Mila Palmitoylethanolamide (PEA)?
Inona ny PEA ho an'ny fibromyalgia?
Inona no fanamaivanana ny fanaintainan'ny neuropathique?
Ahoana no ahafahako matory amin'ny fanaintainan'ny neuropathique?
Ahoana no ahafahako mitsabo fanaintainan'ny hozatra ao an-trano?
Manampy amin'ny neuropathie ve ny rano fisotro?
Azo antoka ve ny Palmitoylethanolamide amin'ny fitondrana vohoka?
Inona no ilana ranoka pea?
Avy aiza ny pea?
Inona no fitsaboana ny pea?
Fahita ve ny Pea amin'ireo marary hypovolemia?
Iza amin'ireto manaraka ireto no mety hiteraka fiverenan'ny gadona pea?
Palmitoylethanolamide (PEA) dia ao amin'ny fianakaviana endocannabinoid, vondrona vondrona amides asidra matavy. Ny PEA dia voaporofo fa manana hetsika analgesic sy anti-inflammatory ary efa niasa tamin'ny fandinihana maromaro mifototra izay mifantoka amin'ny fitantanana ny fanaintainan'ny fanaintainana mitaiza eo amin'ireo marary olon-dehibe miaraka amin'ny fepetra klinika samihafa.
Raisina amin'ny fatra 500mg-1.5g isaky ny doka, isaky ny ora vitsivitsy, ny PEA dia manome ny mpampiasa fahatsapana hafaliana, angovo, fanentanana ary fahasalamana amin'ny ankapobeny. Esp rehefa ampiarahina amin'ny mpanakana mao-b, hordenine, ny PEA dia mitaky hafaliana vaovao sy fahasambarana amin'ny ankapobeny.
Tsy misy ny vokadratsin'ny olana fantatra. Ny PEA dia azo raisina miaraka amin'ireo akora hafa. Manatsara ny fihenan'ny alahelon'ny analgesika mahazatra sy ny anti-inflammatories izy io. Palmitoylethanolamide dia azo ampiasaina miaraka amina akora hafa nefa tsy misy fiatraikany.
Phenethylamine (PEA) dia fitambarana voajanahary, alkaloid monoamine voajanahary, ary amine trace, izay miasa amin'ny rafi-pitabatabana afovoan'ny olombelona.
Rehefa raisina am-bava: Ny fakana palmitoylethanolamide dia azo antoka SAFE ho an'ny ankamaroan'ny olon-dehibe rehefa ampiasaina hatramin'ny 3 volana. Ny voka-dratsy mety hitranga, toy ny vavony malahelo, dia tena tsy fahita firy. Tsy ampy ny fampahalalana azo antoka hahalalana raha azo antoka ny palmitoylethanolamide ampiasaina mandritra ny 3 volana.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny melatonin dia tsy fehezin'ny fitantanana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina (FDA). Izany dia satria melatonin dia tsy heverina ho zava-mahadomelina. Noho izany, dia azo amidy ho famenon-tsakafo toy ny vitamina sy mineraly, izay tsy arahi-maso akaiky ny FDA.
Ny PEA dia singa voajanahary vokarin'ny vatana; tena mandaitra sy azo antoka ampiasaina ho famenony ny fanaintainana sy ny fivontosana.
Ny pitipoà dia maharitra 7 ka hatramin'ny 30 andro vao mitsimoka. Hitsimoka haingana ny voanjo raha 65 ka hatramin'ny 70 degre Fahrenheit ny mari-pana amin'ny tany. Azonao atao ny manafaingana ny fizotry ny fitsimohany amin'ny alemana ny voanjo mandritra ny 24 ka hatramin'ny 48 ora alohan'ny hambolena. Mazava ho azy fa misy lafin-javatra hafa izay misy fiantraikany amin'ny hafaingan'ny fitomboan'ny pitipoà sy hitombo.
Ireo fanampin-tsakafo ireo rehefa lany dia manampy amin'ny fampitomboana ny haavon'ny asan'ny ati-doha ary mampihena ny adin-tsaina. Hita eo amin'ny takelaka misy azy io, ary tsy mila preskripsi ny olona hividianana azy. Phenylethylamine koa dia ampiasaina hanatsarana ny fifantohana sy ny fifantohana.
Izahay dia namolavola ity fandaharam-pitsaboana ity aorian'ny fitsaboana ny mararin'ny neuropathique marary marobe. Miorina amin'ny traikefan'ny klinika anay dia mieritreritra izahay fa ny fiantomboka amin'ny endrika ambany fiteny an'ny PEA mandritra ny 10 andro farafahakeliny dia mety hanampy hahatratra haingana ny haavon'ny fitsaboana PEA.
Karazan-tavy hita voajanahary ao amin'ny vatana no mety ho lakilen'ny torimaso tsara. Manantena ny mpikaroka fa ny molekiola fantatra amin'ny anarana hoe PEA - na palmitoylethanolamide - dia tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny torimaso fotsiny fa koa miady amin'ny fanaintainana ary mampihena ny fivontosana.
Izy io dia azo raisina miaraka amina fanafody fanaintainana hafa na irery, araka ny torohevitra nomen'ny mpitsabo anao momba ny fahasalamana, hanohanana ny fanamaivanana ny fanaintainana. Ny PEA dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fiankinan-doha amin'ny fanafody fanaintainana mafy kokoa izay miteraka voka-dratsy tsy ilaina. Ny tombony be indrindra dia mety haharitra 3 volana fa ny vokatra dia hita matetika ao anatin'ny 4-6 herinandro.
Ny sôkôla dia manana fifantohana be indrindra amin'ny sakafon'ny phenylethylamine, izay simika vokarina ao amin'ny ati-doha rehefa misy olona iray mifankatia. Saingy iadian-kevitra ny anjara asan'ny "amphetamine sôkôla". Ny ankamaroany raha tsy ny phenylethylamine azo avy amin'ny sôkôla dia misy metabolisma alohan'ny hahatongavany amin'ny CNS.
Amin'ny biby mampinono, ny phenethylamine dia novokarina avy amin'ny asidra amino L-phenylalanine tamin'ny alàlan'ny enzim-aromatika asidra L-amino decarboxylase tamin'ny alàlan'ny decarboxylation anzima. Ho fanampin'ny fisiany amin'ny biby mampinono, phenethylamine dia hita ao amin'ny zavamananaina sy sakafo maro hafa, toy ny sôkôla, indrindra aorian'ny fanamasinana microbial.
Ny fikarohana dia naneho fa ny PEA dia manana fananana manohitra ny fanaintainana sy manohitra ny nepticeptive ary mandray azy tsy tapaka dia mety hampisondrotra ny valin'ny voajanaharin'ny vatanao amin'ny fanaintainana amin'ny alàlan'ny fampihenana ny valin'ny sela système nerveuse izay miteraka fanaintainana.
Raisina amina fatra 500mg-1.5g isaky ny fatra, isaky ny ora vitsy, ny PEA dia manome ny fahafaham-po ho an'ny mpampiasa, ny angovo, ny fanentanana ary ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Esp rehefa ampiarahina amin'ny mao-b inhibitor, hordenine, PEA dia manana ambaratongam-pifaliana vaovao sy fahasambarana ankapobeny.
Amin'ny vary orza, ny haavon'ny hordenine dia mahatratra hatramin'ny 5-11 andro aorian'ny fitsimohany, avy eo mihena miadana mandra-pahatongan'ny soritra sisa tavela afaka iray volana. Ankoatr'izay, ny hordenine dia mipaka ao amin'ny faka.
Na dia voamariky tsara amin'ny vatana aza i Palmitoylethanolamide, raha toa ka hitan'ny olona ny voka-dratsiny, dia manoro hevitra izy ireo hampihena ny habetsaky ny fatra amin'ny 400 mg isan'andro.
Ny zava-dehibe kokoa dia tsy tokony alaina ao anatin'ny telo volana ny famokarana. Ny fampiasana PEA maharitra dia mety hiteraka olana amin'ny vavony. Na izany aza, dia lafiny ampiharina izay tsy fahita matetika. Ny tena zava-dehibe kokoa dia tsy tokony hampiasaina amin'ny hoditra sy ny bevohoka ary ny fampinonoana ny vehivavy dia tokony hialana amin'ny fampiasana azy satria tsy ampy ny fikarohana na ny porofo hilazana fa tsy maninona ireo vondrona ireo. Toy izany koa, raha mijaly amin'ny toe-javatra rehetra ianao, dia tsara indrindra ny miresaka amin'ny dokotera alohan'ny hanaovana fitsaboana fanampiny toy ny Palmitoylethanolamide.
Ny valiny dia Cofttek. Cofttek dia mpamokatra akora famenon-tsakafo tonga tamin'ny taona 2008. Mirehareha fatratra amin'ny ekipa R&D manam-pahaizana be dia be izay miasa mandritra ny famantaranandro mba hahazoana antoka fa manana akony avo lenta ny akora atolotra ny mpanjifa. Ny tena zava-dehibe dia manangona vola be amin'ny bioteknolojia sy ny fitsapana an-tsokosoko ny orinasa. Ny vokatra rehetra amidin'ny orinasa dia noforonina tao amin'ny ozinina biokimika teknolojia avo lenta izay mirehareha amin'ny rafitra mpamatsy matotra sy fotodrafitrasa farany ilaina. Io fanoloran-tena io no nataon'ny orinasa hamokarana akora manta avo lenta izay nahatonga an'i Cofttek ho anarana ekena amin'ny tsenan'ny akora. Androany dia manana mpanjifa eran-tany izy io.
pea crème dia crème izay misy fatrany tsara indrindra amin'ny palmitoylethanolamide (PEA) voajanahary sy miaro. Ny crème PEA noho izany dia azo ampiasaina ho fanampin-tsakafo tsara ho an'ny vokatry ny kapsily ao amin'ny vatana.
Palmitoylethanolamide (PEA) dia molekiola matavy izay vokarina kely amin'ny vatana, ho valin'ny fahasimban'ny sela na ny ratra amin'ny tavy na ny hozatra. Ny PEA dia novokarin'ny hery fiarovan'ny vatana ho setrin'ny fanaintainana na fivontosana. Palmitoylethanolamide, fantatra ihany koa amin'ny hoe PEA dia lipida voajanahary voajanahary izay latsaka ao ambanin'ny vondrona amides asidra matavy. Na dia ny hery fiarovan'ny vatana aza io fitambarana io dia misy ihany koa amin'ny biby sy zavamaniry ary noho izany dia azo avy amin'ny loharano ivelany, toy ny atody atody, lecithin soja, alfalfa, ronono, voanjo ary soja. Ny PEA dia manana fananana analgesika mahery ary noho izany dia afaka mitaona fiasa ara-batana marobe ao anaty ny vatana.
Ny PEA dia raisina amin'ny antony anti-inflammatoire sy mampihena ny fanaintainana. Noho izany, ahoana no fiasan'ny PEA indray mandeha ao amin'ny vatana? Rehefa tafiditra ao anatin'ny vatana ny PEA dia mamatotra ny tenany amin'ny tranonkala kendrena izay mamono ny fiasan'ny sela aorinan'ny fizotrany mifamatotra. Ny tena zava-dehibe, ny fikarohana sasany dia mampiseho fa ny fiatraikany analgesika an'ny PEA dia azo avy amin'ny fahafahan'ny fitambarana manelingelina ny fiasan'ny sela miaro hery manokana tompon'andraikitra amin'ny famindrana ireo fambara fanaintainana. Na inona na inona mekanisma tena izy, zavatra iray no azo antoka fa manome fanampiana ny PEA amin'ny fanaintainan'ny neuropathique ary koa ny fivontosana.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, Palmitoylethanolamide (PEA) nanatri-maso tampoka ny lazan'ny tenany. Na dia hita tamin'ny taona 1950 aza ny fananana fitsaboana PEA tamin'ny taona XNUMX ary nanomboka teo dia nianatra tamim-pahalalam-pianarana an'io sompitra io ny mpahay siansa sy mpikaroka, tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ity dia indrindra noho ny andraikitra miaro sy manasitrana izay azon'ny sangan'asa milalao ao anatin'ny vatana ary koa ny fahaizany miatrika fivontosana sy olana amin'ny neuropathika.
Na izany aza, ny vatan'olombelona dia mamokatra PEA amin'ny vola kely dia kely ary matetika kokoa noho ny tsy izy, io vola io dia tsy ampy hanafoanana ny fivontosana sy ny fanaintainana ary noho izany, matetika ny olona no amporisihina handray fanafody PEA. Ny fanalefahana ny fanaintainana sy ny fivontosana dia iray amin'ireo tombontsoa marobe avy amin'ny PEA.
Amin'ny maha-zava-mahadomelina voajanahary azy ireo, ny famenony PEA dia sokajiana any Aostralia, sy ny firenena maro hafa, ho toy ny vokatra sakafo fa tsy fanafody. Ny PEA dia naseho fa manana anti-inflammatoire, antinociceptive, anticonvulsant ary neuroprotective ary ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fanaintainana maharitra.
Fitsaboana fanaintainana Neuropathique Anticonvulsant sy antidepressant fanafody matetika no andalana voalohany amin'ny fitsaboana. Ny fanadihadiana sasany momba ny fanaintainan'ny neuropathique dia manome soso-kevitra ny fampiasana zava-mahadomelina miady amin'ny inflammatoire (NSAID), toy ny Aleve na Motrin, dia mety hanamaivana ny fanaintainana. Ny olona sasany dia mety mila fanafody fanaintainana matanjaka kokoa.
Ny fatoriana miaraka amin'ny lohalinao ambony dia mety hanamaivana ny soritr'aretinao maharary amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny tsindry apetraky ny kapilao eo amin'ny fakan'ny nerveo. Mipetraha eo an-damosinao — tazomy hifandray am-pandriana ny ombelahin-tongonao sy ny vodin-tongotrao ary aolaho kely ny lohalika mankany amin'ny valindrihana.
Paikady amin'ny fanalefahana ny fanaintainan'ny nerve. Tohizo ny diabeta. Raha voan'ny diabeta ianao, aza hadino ny mifehy ny siramamy amin'ny rà. Mandehana. Ny fanatanjahan-tena dia mamoaka fanafody fanaintainana voajanahary antsoina hoe endorphins. Atsaharo ny tongotrao. Raha voan'ny aretin-kozatra ny tongotra dia fotoana tokony hifantohana amin'ny fikarakarana tongotra tsara.
Tsy vitan'ny hoe miala sasatra ny rano mafana, fa afaka manatsara ny fivezivezena manerana ny vatanao koa. "Afaka manome fanamaivanana eo noho eo izy io," hoy i Vinik. Fa satria ny neuropathie diabeta dia mety hiteraka fahaverezan'ny fahatsapana, alao antoka fa tsy mafana be ny rano alohan'ny hidiranao.
Tsy tokony hampiasain'ny vehivavy bevohoka. Palmitoylethanolamide dia mety hanampy amin'ny sakafo ara-tsakafo sy ny fanaintainana maharitra. Tokony horaisina eo ambany fanaraha-mason'ny mpitsabo fotsiny izany.
Ny PEA dia naneho fahombiazana amin'ny fanaintainana maharitra amin'ny karazana maro mifandraika amin'ny toe-javatra maharary, indrindra amin'ny fanaintainan'ny neuropathique (nerve), fanaintainana ary fanaintainan'ny visceral toy ny endometriozy sy cystitis interstitial.
Palmitoylethanolamide dia simika vita amin'ny tavy. Hita voajanahary ao amin'ny sakafo toy ny atody atody sy voanjo ary amin'ny vatan'olombelona. Izy io koa dia ampiasaina ho fanafody.
Ny epinephrine dia tokony hampidirina amin'ny dosie 1-mg intravena / intraosseous (IV / IO) isaky ny 3-5 minitra mandritra ny fisamborana herinaratra tsy misy hery (PEA). Ny doka epinephrine ambony dia efa nodinihina ary tsy mampiseho fanatsarana ny fahavelomana na ny vokatry ny neurologika amin'ny ankamaroan'ny marary.
Ao amin'ny karazana etiology PEA, ny pseudo-PEA dia matetika vokatry ny hypovolemia, tachydysrhythmmias, fihenan'ny fihenan'ny fo, na ny sakana amin'ny fivezivezena, toy ny embolism pulmonary, tamponade, ary ny pneumothorax fihenjanana.
Ny hypovolemia sy ny hypoxia no antony roa mahatonga ny PEA. Izy ireo koa no mora avadika indrindra ary tokony ho eo an-tampon'ny diagnostika samihafa. Raha miverina miverimberina mivezivezy tampoka (ROSC) ilay olona, ​​miroso amin'ny fikarakarana ny fisamborana aorian'ny fo.
Nandritra izay taona vitsy lasa izay, ny lazan'ny Palmitoylethanolamide dia nahita fiakarana goavana, voalohany indrindra satria ny olona dia lasa mahalala bebe kokoa ny fampiasana azy. Amin'izao andro izao, ny olona dia mampiasa Palmitoylethanolamide voalohany indrindra ho an'ny vokany analgesic, fa matetika koa dia omena azy io hiadiana amin'ny aretina lehibe, toy ny aretin'i Lou Gehrig, neuropathie diabeta, sclerosis marobe, fibromyalgia, syndrome ny tunnel carpal, glaucoma, autism, eczema, endometriozy ary koa karazana aretina hafa. Amin'izao andro izao, ny fanampiana Palmitoylethanolamide (PEA) dia ampiasain'ny olona hampiroborobo ny fihenan'ny lanja ihany koa. Na izany aza, mila fikarohana bebe kokoa amin'ity faritra ity.
① Ny fikarohana taloha dia mampiseho vokatra mahomby amin'ny fitsaboana ny aretin'i Lou Gehrig
Ny aretin'i Lou Gehrig na sclerose lateral Amyotrophic (ALS) dia aretina mitera-doza izay mitarika ho amin'ny fihenan'ny motera-neuron ary amin'ny farany malemy mandroso. Ny fikarohana voalohany dia mampiseho fa ny palmitoylethanolamide rehefa nalaina tamin'ny riluzole, dia mety hanampy amin'ny fanatsarana io aretina io. PEA dia endocannabinoid izay manatsara ny fiasan'ny pulmonary amin'ny marary ALS.
② Izy io dia manampy amin'ny carpal Tunnel Syndrome
Carpal Tunnel Syndrome dia toe-javatra misy fiantraikany amin'ny tanana. Ny olona mijaly noho ity toe-javatra ity dia mahatsapa fahatsapana sy harerahana eny an-tanana. Misy fiantraikany amin'ny tanana manontolo io toe-javatra io, anisan'izany ny rantsantanana rehetra ankoatra ny rantsan-tànana kely. Ny fandinihana natao tamin'ny taona 2017 dia nanambara fa ny PEA dia mety ho ampiasaina mahomby amin'ny fitsaboana sindrom mampihetsi-po, anisan'izany ny Carpal Tunnel Syndrome. Noho izany, ny fanampin-tsakafo PEA dia azo raisina mba hifehezana ny fanaintainana sy ny alahelo vokatry ny Carpal Tunnel Syndrome.
③ Mety mandaitra ihany koa amin'ny fanamafisana amin'ny diabeta sy ny fibromyalgia
Ny neuropathie diabeta dia fahavoazana vokatry ny diabeta vokarin'ny diabeta. Ny iray amin'ireo soritr'aretina mahazatra indrindra amin'ny neuropathie diabeta dia fanaintainana amin'ny tongotra sy tongotra. Fibromyalgia, etsy ankilany, dia toe-javatra iray izay misy fiantraikany amin'ny rafitra musculoskeletal. Ankoatry ny olana amin'ny havizanana sy fahatsiarovana, ny fambara mahazatra amin'ny fibromyalgia dia fanaintainana amin'ny rafitra musculoskeletal iray manontolo.
Samy ny neuropathy diabeta sy ny fibromyalgia dia aretina mampahory izay tsy dia mahazatra. Soa ihany, ny fanaintainana mifandray amin'ny roa tonta ireo dia azo fehezina amin'ny fampiasana palmitoylethanolamide.
④ Azo ampiasaina hitsaboana ireo soritr'aretina simika marobe
Ny Sclerosis Multiple dia toe-javatra iray izay manomboka manafika ny myelin izay manarona ny nerveo, izay mitodika, na mihena na tsy misy fifandraisana eo amin'ny atidoha sy ny sisa amin'ny vatana. Ny aretina dia mety hongilana tanteraka. Na izany aza, ny fikarohana natao voalohany dia mampiseho fa ny PEA, raha omena miaraka amin'ny interferon-beta1a, dia afaka manampy hanamaivana ny soritr'aretina mifandray amin'ny Sclerosis Multiple.
⑤ Mety mandaitra hanoherana ny glaucoma sy ny tsy fahazoana aretina amin'ny temporomandibular
Ny glaucoma dia toe-javatra iray izay misy fiantraikany amin'ny nerve optic ary antony mitarika fahajambana eo amin'ireo olona 60 taona ka ho ambony. Ny fikorontanan'ny TMJ, etsy ankilany, dia miteraka fanaintainan'ny valan-jaza. Ny fikarohana dia naneho fa ny palmitoylethanolamide na PEA dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fanaintainana naterak'ireo roa tonta ireo.
⑥ Tombontsoa hafa
Afa-tsy ireo fampiasana voalaza etsy ambony, ny PEA koa dia aroso amin'ny fanaintainan'ny fanaintainana ary koa ny post-surgery analgesic. Amin'ny toe-javatra sasany, dia ampiasaina koa amin'ny fitsaboana ireo fepetra hafa, toy ny aretin'andoha, fahaketrahana, eczema, endometriosis, autism, aretin'ny voa ary fanaintainan'ny vava. PEA koa dia naneho fahombiazana manohitra ny fahazoana lanja. Na izany aza, mila fikarohana bebe kokoa amin'ireo faritra ireo.
Nandritra ny taona maro, ny fanadihadiana isan-karazany dia nampiasa doka samihafa ary noho izany, tsy misy fatra azo heverina ho tonga lafatra. Na izany aza, ampandrenesina ny olona hitazona ny fihinanana fatra Palmitoylethanolamide (PEA) latsaky ny 300-1,200 mg isan'andro. Ireo izay mandray fanafody famelomana Palmitoylethanolamide dia asaina maka 350-400 mg intelo isan'andro ary ny faharetan'ny fatra dia tsy tokony hihoatra ny 2 volana amin'ny fitambarany.
(1) Gabriella Contarini, Davide Franceschini, Laura Facci, Massimo Barbierato, Pietro Giusti & Morena Zusso (2019) 'Ny palmitoylethanolamide / luteolin miaraka amin'ny mikraoba mikraoba dia manalefaka ny isa ara-pahasalamana sy ny mariky ny molekiola mifandraika amin'ny aretina amin'ny maodely voalohan'ny encephalomyelitis autoimmune', Gazety Neuroinflammation,
(2) Maria Beatrice Passavanti, Aniello Alfieri, Maria Caterina Pace, Vincenzo Pota, Pasquale Sansone, Giacomo Piccinno, Manlio Barbarisi, Caterina Aurilio & Marco Fiore (2019) 'Fampiharana klinika an'ny palmitoylethanolamide amin'ny fitantanana fanaintainana: protokol ho famerenana scoping', Sokajin-kevitra momba ny Systematic,
(3) Eleonora Palma, Jorge Mauricio Reyes-Ruiz, Diego Lopergolo, Cristina Roseti, Cristina Bertollini, Gabriele Ruffolo Pierangelo Cifelli, Emanuela Onesti, Cristina Limatola, Ricardo Miledi, Maurizio Inghillerid (2016) 'Mpandray acetylcholine avy amin'ny hozatry ny olombelona ho lasibatra ara-panafody ho an'ny fitsaboana ALS', Procara Natl Acad Sci US A.,
(4) Di Cesare Mannelli, G. D'Agostino, A. Pacini, R. Russo, M. Zanardelli, C. Ghelardini, A. Calignano (2013) 'Palmitoylethanolamide dia maso manova aretina amin'ny Neuropathy Peripheral: Ny fanampiana ny fanaintainana sy ny neuroprotection dia mizara mekanisma PPAR-Alpha-Mediated', Mediators Inflamm.
(6) FIJOROANA HITSARA ny EGT
(7) OLEOYLETHANOLAMIDE (OEA) –Y TIA MAHAGAGA NY FIAINANAO
(8) Anandamide VS CBD: Iza amin'ireo no tsara kokoa amin'ny fahasalamanao? Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba azy ireo!
(9) Ny zavatra rehetra mila ho fantatrao momba ny Nicotinamide Riboside Chloride
(10) Magnesium L-Threonate Famatsiana: Tombontsoa, ​​Fatra sy lafiny
(11) Top 6 Tombontsoa ara-pahasalamana amin'ny famatsiana Resveratrol
(12) Tombontsoa 5 amin'ny fahazoana Phosphatidylserine (PS)
(13) Tombontsoa 5 amin'ny fividianana Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)
(14) Ny fanampin-tsakafo Nootropic tsara indrindra an'ny Alpha GPC
(15) Ny fanampin-tsakafo tsara indrindra amin'ny Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Azo antoka ho an'ny alikako izay manana aretina Lymes mitaiza?
Tranonkala mahafinaritra anananao eto fa tiako ho fantatra raha fantatrao ny momba ny forum momba ny fiarahamonina izay miresaka ireo lohahevitra noresahina teto ireo? Tena tiako ny ho anisan'ny vondrom-piarahamonina ahafahako mahazo sosokevitra avy amin'ireo olona za-draharaha hafa izay mitovy fahalianana. Raha manana sosokevitra ianao dia ampahafantaro ahy. Mitso-drano anao!
Izaho dia naka PEA (sy CoQ10) hatramin'ny fahavaratra. Tamin'ny voalohany dia tsy zakako izany noho ny olana amin'ny tsinay. Ankehitriny ny zavona amin'ny ati-dohako sy ny lohako dia saika lasa, izay somary hafahafa ihany raha jerena fa manana azy ireo isan'andro.
Tena mandray PEA aho. Miasa ankolaka amin'ny mpitsabo mpanampy cannabinoid izy io. Izy io dia misy fiatraikany fanampiny raha alaina amin'ny cannabinoids toy ny CBD. Matetika dia raisina amin'ny 1,200mg / andro fa 400mg fotsiny no raisiko satria efa misy fatra avo lenta ny CBD aho (200mg / andro).
Ny PEA dia voajanahary ao amin'ny vatana, tsy mampiankin-doha, tsy mahazaka fandeferana ianao ary voaporofo fa mahomby amin'ny fanaintainana sy ny fivontosana amin'ny fandinihana nanomboka ny taona 1950 ..
Ny vadiko no mandray azy ary mieritreritra fa tsara izany.
Misaotra anao aho tamin'ny ezaka nataonao tamin'ny fanoratana ity tranokala ity. Manantena aho ny hahita ny atiny avo lenta mitovy aminao avy eo ihany koa. Raha ny marina, ny fahaizanao manoratra mamorona dia namporisika ahy hanana tranonkala manokana ahy manokana;)
Satria ny iray amin'ireo loza mety hitranga indrindra amin'ny COVID-19 dia toa tafio-drivotra cytokine izay mahatonga ny fivontosana hanimba be dia be alohan'ny hamelezan'ny hery fiarovantsika hery hiadiana amin'ny virosy dia toa fanampiana azo antoka izay manampy amin'ny fampihenana ny habetsaky ny cytokines. fomba tsara avela hamela ny hery fiarovan'ny vatana hiady amin'ity aretina ity.
Tohizo ity azafady, asa tsara!
Ho ahy dia manampy amin'ny fivontosana izany. Fanampiana amin'ny torimaso tsara koa, mahazo torimaso amin'ny fatra tapany.
Toa mampanantena ity zavatra ity
Nanoro hevitra an'i Palmitoylethanolamide ny mpitsabo ahy. Nandray an'i Mirica PEA nandritra ny 3 volana aho. Sarotra ny mahazo antoka. Nihatsara be ny soritr'aretiko, saingy betsaka koa ny fotoana lasa. Nijanona fotsiny aho ary tsy nahatsikaritra fahasamihafana lehibe teo amin'ny fahatsapako. Tsy nisy vokany ratsy teo am-panaovana azy io, ka farafaharatsiny toa tsy naratra izany.
Ny ankabeazan'ny zavatra dia tsara amin'ny vavony foana, raha tsy hoe manana fiandohana matotra izy ireo mampiseho fanatsarana fanatsarana fa tsy fanalefahana tavy fotsiny, raha tsy hoe miteraka olana amin'ny vavony (zinc)
Raisiko amin'ny vavony foana izany ary mety efa nanao imbetsaka aho.
Welp dia nanao risika aho ary nandidy ny sasany androany. Sasatry ny fanaintainan'ny kibo antenaina fa mandaitra.
Palmitoylethanolamide dia amide asidra matavy endogenous. Midika izany fa ao amin'ny vatanao izao.
Ny olona sasany dia manao ambanin-javatra fotsiny, ary mihintsana ny haavonao rehefa mihalehibe ianao. Noho izany ny fanampiana dia afaka manampy amin'ny famerenana ireo ambaratonga ireo. Hita ihany koa amin'ny sakafo izany. Tena azo antoka. Tsy azon'ny ankamaroan'ny olona hoe inona izany, ary tsy azony tanteraka ilay hevitra.
Raha olona manana fatra voajanahary tsara an'ny PEA amin'ny vatanao ianao dia mety tsy hahatsapa na inona na inona. Na izany aza, ny olona izay manana ambaratonga ambany voajanahary dia mahatsapa mafy ny vokany. Izany no antony ahitanao fomba fijery polarize ao.
Noho ny fanaintainana dia hitako tato ho ato izay noraisiko tamin'ny 1200mg isan'andro ary toa manampy izany
Nankany amin'ny rheumatologista ny reniko ny andro hafa, ary nolazaina taminy fa tsara ny biomarker ho an'ny fivontosana, sambany izy io! Tsy tadidiko tsara-- ary azoko antoka fa tsy fantatry ny reniko izany hoe: inona no refy ampiasain'izy ireo, saingy nilaza tamiko izy fa ny elanelam-bidin'ity biomarker ity dia misy eo anelanelan'ny 0-30, ary matetika dia tapitra izy 60. Tamin'ity indray mitoraka ity dia 15 taona izy.
Nandany ny antsasak'adiny tsy tapaka namakiako ny atiny an'ity pejy ity hatrany aho niaraka tamin'ny kafe iray kapoaka.
Palmitoylethanolamide dia tsara kokoa amin'ny fivontosana sy fanaintainana. Oleamide dia tsara kokoa amin'ny torimaso. Samy tsara ho an'ny tsimatimanota. Nisafidy ny PEA izahay amin'ny fiarovana ny tsimatimanota mba tsy hiteraka hamamoana.
Manana migraines matetika ihany koa aho, matetika in-1-2 isam-bolana ary Palmitoylethanolamide no fahagagana ho ahy rehefa migrenie aho.
Izaho dia naka PEA amin'ny vovoka. Hitako fa manatsara kely ny fanaintainana ambonin'ireo zavatra hafa raisiko rehetra.
Ny iray dia (P) Phenyl (E) etil (A) amine ary ny iray kosa dia (P) Palmitoyl (E) etanol (A) amide. Ary koa, ny olona dia manafangaro an'i Phenylethylamine amin'ny Phenylalanine amin'ny fotoana rehetra, ary koa Cytisine amin'ny Cysteine. Indraindray ny fitambarana simika dia tsipelina akaiky be, ary indraindray dia mitovy ny fanafohezana. Tsy afaka milaza aho hoe tiako izany, fa be vava kosa i Palmitoyalethanolamide. Ka ny fanafohezana izany dia mora kokoa.
Noraisiko noho ny fanaintainan'ny tatavia (antony tsy fantatra) ary tena niasa tsara. Io ihany koa no tena ilaina amin'ny fitsaboana amin'ny alika (ho an'ny allergy) ary toa manampy izany.
Tsy misy voka-dratsy ho antsika. Tsy nisy fiatraikany tamin'ny torimasako. Oh! Saingy nanala ny lohaliko narary koa izy, izay bonus tsy nampoizina.
Ny PEA dia manampy ahy hahatsapa fa manana fanaintainana somary ambany hatrany aho, ary mahafinaritra rehefa mihena vetivety izany.
Niaritra fanaintainana miverimberina efa ho folo taona aho. Ny PEA dia mahatonga azy ho antonony, ary rehefa mahasosotra ny fanaintainako, dia toa mahazo aina kokoa amin'ny vatako manontolo ny PEA.
Namaly i Edmund.
Palmitoylethanolamide dia amide asidra matavy endogenous. Midika izany fa ao amin'ny vatanao izao. Ny olona sasany dia manao ambanin-javatra fotsiny, ary mihintsana ny haavonao rehefa mihalehibe ianao. Ka ny fanampiana dia afaka manampy amin'ny famerenana ireo ambaratonga ireo. Hita ihany koa amin'ny sakafo izany. Tena azo antoka. Tsy azon'ny ankamaroan'ny olona hoe inona izany, ary diso tanteraka ny heviny. Raha olona manana fatra voajanahary tsara an'ny PEA amin'ny vatanao ianao dia mety tsy hahatsapa na inona na inona. Na izany aza, ny olona izay manana ambaratonga ambany voajanahary dia mahatsapa mafy ny vokany. Izany no antony ahitanao fomba fijery mandoto azy.
Raha ny momba ny fanontanianao momba ny COX-2 manokana dia modulator an'ny COX-2 fa tsy mpanakana mpifaninana. Izy io dia mifamatotra amin'ireo mpandray endocannabinoid GPR55 sy GPR119. Toy izany no mandrindra ny fitenin'ny cyclooxygenase-2 (COX-2) ary koa ny synthase azota azota tsy azo ovaina (iNOS). Izy io koa dia agonistan'ny PPAR-α, izay mifehy ny fahasimban'ny IkB-alpha sy ny famindrana nokleary p65 NF-kappaB. Ny fifandraisana PPAR-α dia ny fomba mampihena ny neuroinflammation. Ambonin'ny fifamatorana mivantana, dia mitarika fitomboan'ny fametahana anandamide ho an'ny CB1 sy CB2 receptor, izay endocannabinoid voalohany amin'ny vatanao. Tena fitambarana mahafinaritra!
Te-hanao lahatsoratra momba an'ity zavatra tsy dia fantatra loatra ity izay tena mampanantena ny marary miteraka fanaintainana maharitra. Palmitoylethanolamide (PEA) dia amida asidra matavy izay miseho voajanahary amin'ny vatan'olombelona sy amin'ny vatan'ny biby sy zavamaniry maro hafa. Dokotera italianina iray antsoina hoe Rita Levi-Montalcini no nahatsikaritra fa ny PEA dia manana toetra anti-inflammatoire sy analgesic
Tao anatin'ny jamba indroa, fitsapana voafehy tamin'ny plasebo miaraka amin'ny marary 636 sciatic pain, ny isa ilaina hitsaboana (NNT) hahatratra 50% ny fihenan'ny fanaintainana raha oharina amin'ny baseline dia 1.5 taorian'ny fitsaboana 3 herinandro
Fikarohana momba ny fanaintainana maro karazana ny PEA. Tsy nisy ny voka-dratsy hita teo raha ny fahitako azy.
Famerenana fohy momba ny fampiasana Palmitoylethanolamide amin'ny fitsaboana ny fanaintainana maharitra. Vitsy ny fanadihadiana momba azy io amin'ny marary IBS sy amin'ny maodelim-biby an'ny IBS. Raha jerena ny andraikitry ny rafitra endocannabinoid amin'ny rafitry ny gastrointestinal dia lahatsoratra mahaliana iray ity hijerena bebe kokoa ny anjara asan'ny PEA sy ireo mpandray mandray anjara amin'ny fitsaboana ny fanaintainana.
Aiza no azo antoka ny palmitoylethanolamide (PEA)?
Vao haingana aho no nanafatra vovoka PEA ary vao tonga tamin'ny mailaka androany. Nanao fikarohana fanampiny aho momba ny mety hisian'ny risika amin'ny PEA satria mpanakana COX2 io.
Milamina ve ny fandraisako PEA?
Palmitoylethanolamide dia nanasitrana ny fanaintainako ho toy ny fahagagana!
Te handroaka an'ity aho satria mety hisy olon-kafa hahita an'izany mahasoa toa ahy. Nijaly nandritra ny 20 taona mahery aho. Nandeha tany Stanford aho, efa tany amin'ny zava-drehetra nanomboka tamin'ny Fentanyl ka hatramin'ny morphine ka hatramin'ny oxy sy benzos, anti depressants sns. Efa nandalo fandidiana maro aho ary nisy zavatra notsapaina nandritra ny taona maro, saingy tsy nisy fanahy na iray aza nanoro hevitra ahy hanandrana an'ity fanafody tsotra ity. Nisy zavatra nanampy fa tsy nisy nety. Mandratra isan'andro aho isaky ny mametraka na mipetraka aho. Sarotra indraindray ny nandeha an-tongotra. Izy io dia olana iray ao amin'ny hazondamosiko ambany noho ny fandidiana taloha izay misy fiantraikany amin'ny hozatrao. Ny torimaso dia zavatra azoko 30 minitra isaky ny mandeha ary matetika nandeha andro nefa tsy nahazo mihitsy.
Vao haingana izay olona fantatro no nanoso-kevitra fa manandrana zavatra antsoina hoe PEA aho. Tsy nanana finoana aho fa handeha io. Saingy toa azo antoka ihany izany. Natomboko ilay izy izay misy amin'ny Amazon ary efa nianatra nandritra ny 60 taona nefa mbola tsy henoko mihitsy. Ny Palmitoylethanolamide antsoina hoe Palmitoylethanolamide (PEA, mba tsy hifangaro amin'ny Phenethylamine izay fohy koa ny PEA) dia Palmitoylethanolamide voajanahary hita ao amin'ny vatantsika sy ny sakafontsika. Izy io dia "amide asidra matavy" izay misy fiatraikany lehibe amin'ny rafitra endocannabinoid (ary mampiroborobo anandamide, ny cannabinoid endogenous antsika).
Mihinana 120mg indroa isan'andro aho. Tsy nahita na inona na inona aho tamin'ny voalohany. Raha ny marina ny herinandro voalohany dia iray amin'ireo tohatra ratsy indrindra azoko nandritra ny fotoana elaela. Tamin'ny herinandro faharoa dia nifoha maraina aho fa nahatsiaro fa natory nandritra ny alina. Lasa ny fanaintainako. Noheveriko fa fluke io. Tsy nisy nitomany na dia kely aza. Nikatona teo aloha nandritra ny andro vitsivitsy. Efa iray volana mahery izao nefa mbola tsy misy fanaintainana. PEA dia fantatra fa miasa ho anti-inflammatoire ary noho ny fanaintainan'ny hozatra. Ny fisedrana ara-pitsaboana madinidinika sasany nataon'ny FDA aza dia naneho fampanantenany amin'ireo faritra ireo.
Misy TON iray ny filazan'ny olona milaza fa hanasitrana ny karazan-javatra isan-karazany ny PEA. IDK momba izany rehetra izany. Ny fantatro dia ny fanampiana ny fanaintainako mihoatra ny zavatra hafa rehetra noraisiko. Niala tamin'ny fanaintainako 100% aho. Niala tamin'ny mediko rehetra aho ary mbola tsy nisy fanaintainana !!! Notsofina ny sain'ny dokotera ary hanandrana izany amin'ny marary hafa izy.
Raha manandrana ianao dia manome herinandro vitsivitsy. Sarobidy izany. Tsy fantatra ny mifanerasera amin'ny meds hafa na manana fetra misy poizina fantatra fa toy ny misy zavatra manomboka miadana. Dosis mihoatra ny 300mg dia manome aretin'andoha kely ahy.
Tsy miasa afa-tsy amin'ny fanaintainako. Mbola mahatsapa fanaintainana sy fanaintainana ara-dalàna aho. Raha tsy izany dia mahazo aina fotsiny aho. Raha mijaly amin'ny fanaintainan'ny nerveo ianao dia mendrika ny hanome azy io.
Ny magnesium dia malaza amin'ny antony mahatonga ny nofinofy adala, ny 5-HTP mifandray amin'ny nofy koa iirc.
Tsy afaka mandray manezioma latsaky ny 3h aho alohan'ny hatory na raha tsy izany dia manonofy be dia be aho, tsy mahazo torimaso tsara.
Nahita an'i Palmitoylethanolamide aho tato ho ato, ary manandrana aho. Herinandro teo ho eo izay no nanombohako nanomboka nampiasa azy io ary nanampy ahy kely izany.
Mahatonga ahy ho tony be izany zavatra izay tsy nampoiziko.
Palmitoylethanolamide, sakafo manokana ho an'ny tanjona ara-pahasalamana, amin'ny fitsaboana ny fanaintainana mahatsiravina: famakafakana data Meta mifangaro. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26815246
Raha jerena, misy fahasamihafana misy eo amin'ny fiantraikan'ireto asidra matavy roa ireto eo aminao?
Toa tena mitovy amin'ny moa izy roa, tsy azo antoka raha mendrika ny manandrana ny iray hafa. Mikaroka indrindra ny Immune balancing, bonus ho an'ny fampivoarana ny kalitaon'ny torimaso.
Io no hevitro
Ny mifanaraka amin'izany dia vovoka fotsy tsara. Noraisina tamim-pahatsorana, tsy nisy tsirony izy ary nopotehina miadana tokoa, angamba satria tsy mety levona amin'ny rano.
Nanana traikefa nahafinaritra aho nandritra ny 10 andro hatramin'ny nanombohako naka azy.
Volana vitsivitsy lasa izay ary tiako izany. Mahatsiaro ho tsara kokoa aho ary tsy nahatsikaritra ny vokany.
Mandray 600 mg in-droa isan'andro aho ary maharitra herinandro mahery kely ary miavaka ny valiny.
Tsy manana olana amin'ny magnesium aho fa ny 5htp alohan'ny hatory dia nanonofy ratsy ahy talohan'izay. Tsy maintsy namindra ny 5htp ho hariva aho.
Palmitoylethanolamide dia omena ahy ny fanaintainana fibromyalgia. Ary tsy mifoha intsony aho fa tsy nokapohina tamin'ny torimaso.